Legends of Shangri-La | Slots Ucingo Khulula | Kuhle UK Ucingo Casino
Legends of Shangri-la is a slot isiqophi akhiwa isofthiwe Net Ezokuzijabulisa. Ngomuzwa elihle ukhanyisele nokuzwana, uzobe ngayiswa mnene yokudlala entabeni kuze kube lapho indela uyophinde uhamba nobani. Isihloko asuka esigodini yokudlala ezavela inoveli Lost Horizon eyabhalwa James Hilton. Njengazo zonke Slots mobile khulula, izilingo inganikelwa kanye reels kungenziwa baphotha kunoma iyiphi yekhasino Netent.
Oduduzayo eSigodini Slots mobile khulula
nge 6 itolitji futhi 5 imigqa, slot kuzokusa ipharadesi engowenhlabathi. Ububanzi ukubheja iqala kusukela 10p spin ngayinye futhi uya kuze £ 200 spin ngayinye. I ojekamanzi, izimbali, izimvemvane, koi carp, nezimpawu ezintathu guru ezifaka indlovu, ikati kanye ne-akhawunti inkawu ukuze izimpawu. Wins azonikezwa njengoba ngamunye amaqoqo akhiwa izimpawu.
Slots mobile khulula Amazing Ibhonasi
amatshwayo (izimpawu guru) woza embondelene lapho ivele itolitji. Ikati okhokhela kunazo zonke njengoba okhokhela 1,000 izikhathi esigxotsheni kodwa kuphela uma ufike lapho 30 izimpawu phezu itolitji. Lokhu empeleni kusho ku ukwakha yinhlanganisela okungenani 9 izimpawu. Uphawu Ukushintshwa kukhona okuzokwenza zuku wokuguqula uphawu eduze ukuze yakha okungcono inhlanganisela okwenzeka ngokuwina.
Isici ibhonasi okuthiwa enamathelayo kabusha osebenzisa Ufika isebenze lapho 2 noma amaqoqo ngaphezulu (non-ngokuwina) nokuthi futhi okufanayo uphawu umhlaba phezu itolitji. Letimphawu bahlale endaweni yabo kuyilapho abanye baqhubeke ukuphotha. Njengoba nje imuphi umfanekiso omusha okunamathelayo livela kabusha osebenzisa uzoyeka.
Esinye isici ibhonasi okuthiwa Mahhala osebenzisa isici esiyinhloko kusukela lapho abadlali ungathola benzuzo. Lolu phawu Ufika senziwa ku kokufika okungenani 3 khulula spin izimpawu. Lapho ehla ezimbili khulula spin izimpawu the sikhuthazo itolitji isici bazobuyekezelwa isebenze. Uma uyosibonisa zincane kunaloko kayishumi esigxotsheni Imininingwane, eyodwa ezengeziwe spin khulula uzonikezwa kuwe ukuze kukusize. Kuningi Slots mobile khulula osebenzisa kanye namanye izici ibhonasi lapho ethubeni lokuba yinzuzo futhi lokhu omunye wabo.
Ukuvala Imicabango: The Legends of Shangri-la Slot Review
I slot ingadlalwa wonke amadivaysi. Isihloko slot okuyinto ngempela okuqhubekayo esibonisa I Orient- ibonakala ekhangayo. Gcina nibheke sikhuthazo itolitji, osebenzisa free, futhi okunamathelayo kabusha osebenzisa ngoba lokhu kuzuzisa kakhulu. Lona omunye Slots mobile khulula osebenzisa okuyizinto ngokwanele ngawe ukuba uthole umklomelo ehloniphekile. Ngakho nilindele lokho? Zama lokhu slot namuhla uqobo.